किन गोप्य राखियो ‘छक्का पञ्जा’मा आर्यनलाई ? | OnlineChautari.com
किन गोप्य राखियो ‘छक्का पञ्जा’मा आर्यनलाई ?
September 12, 2016 | 4:46 pm
नेपालभर हाउसफुलको व्यापार गरिरहेको चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ हेर्ने दर्शकहरुले अभिनेता आर्यन सिंदेललाई सरप्राईज गिफ्टको रुपमा पाईरहेका छन् । यसअघि चलचित्रको ट्रेलर, गीत तथा चलचित्रको प्रचार सामग्री कतैपनि आर्यन रहेको जानकारी दिईएको थिएन । चलचित्रमा आर्यनको पनि बिषेश भूमिका छ भन्ने कुरा चलचित्र प्रदर्शन पछि मात्र खुल्न आएको हो ।
चलचित्रमाहाँस्य कलाकारहरुकै हालीमुहाली रहेको छ । हास्य कलाकारहरुले नै निर्माण गरेको यो चलचित्रमा प्रियंका कार्की, दीपकराज गीरी, जीतु नेपाल केदार घिमिरे, बुद्धि तमाङ,बर्षा राउत र नम्रता सापकोटालगायतको अभिनय रहेको छ ।
चलचित्रमा कलाकार दिपकराज गिरी ‘राजा’को भुमिकामा छन् भने जितु नेपाल ‘बाहुन’, बुद्धि तामांग र केदार घिमिरे एक गरिब परिवारको भुमिकामा छन् । यी चारपात्र साथीको रुपमा एकसाथ हुन्छन् । यसैबिच नायक आर्यन सिग्देल पनि चलचित्रको उत्तारार्धमा देखा पर्छन । भूमिका छोटो भएपनि दर्शकमा राम्रो छाप छोड्न सफल देखिन्छन् आर्यन सिंग्देल ।
छक्का पञ्जाले गर्यो ५ दिनमा ३ करोड कलेक्शन
गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्रले देशभर उत्साहजनक दर्शकको साथ पाईरहेको छ । प्रदर्शनको ५ औं दिनमा चलचित्रले ३ करोड कलेक्शन…
नेपालको कानुनले दिपकसँग बिहे गर्न नदिएको दीपाको गुनासो
कलाकार दीपाश्री निरौलाले नेपालको कानुनले बहुबिबाहालाई मान्यता दिएको भए आफ्नो बिहे कलाकार दिपकराज गिरीसँग भैसक्ने बताएकी छिन् । एक अनलाईन…